Have They Gone Madder Than Mad ??
[BERGAMBAR] Melentur Buluh Biarlah Dari Rebungnya...
သည်းမခံခြင်းသည်လည်း ကောင်းမှုကုသိုလ် ( ကောင်းကင်ကို)
[BERGAMBAR] Melentur Buluh Biarlah Dari Rebungnya..
Sebenarnya Mahathir Resah Gelisah Kekuatan Pakatan Rakyat
The Rooster Riddle
Two Foochow Women andaLoad of Goodies
Bersih Sues New Straits Times For Defamation
Stroke A Blessing From God
Konsert PSY: BN Khianati Artis Tempatan, Lebih Mahal Dari Peruntukan YA1M
It's A Matter of Perception *joke*
Deepak Bom Najib Lagi: Yakin 90% Pegawai Najib Ada Semasa Altantuya Dibunuh
Induce Older Mums Early To Reduce Stillbirth
Posted: 07 Feb 2013 09:37 AM PST
Posted for laughs
Posted: 07 Feb 2013 05:58 AM PST
I just read this posting http://syedsoutsidethebox.blogspot.com/2013/02/saudi-madrasah-retard-fined-for-rape.html
Please check this article..the Islam we embrace bukan barbaric macam ni..
We can get cardiac arrest reading the Saudi Court's sentence..
Dah tebiat betul Pak Arab ni..malunya kita orang Islam dengar.
Posted: 07 Feb 2013 10:40 AM PST
Melentur buluh biarlah dari rebung bermaksud mendidik anak-anak biarlah sejak kecil lagi kerana apabila besar, majoriti yang sudah tidak mampu 'dilentur' lagi.
Ketika anak-anak masih 'rebung', ia masih 'lembut' dan mudah dilentur dan dibentuk tetapi perlu berhati-hati kerana kerja-kerja melentur kena ada cara dan etikanya.
Kalau tidak 'rebung' yang rapuh boleh patah. Dan apabila sudah menjadi buluh (dewasa), kerja melentur adalah suatu yang mustahil kerana kekuatan buluh sebenarnya mengatasi besi. Jika dilentur ia akan kembali ke sifat asalnya.
Posted: 07 Feb 2013 08:00 AM PST
I have been readingalot on mobile phone tracking.
Did you know there are various real time cell phone tracking services with GPS and GSM network systems?
I came across this service developed on integration of GPS satellites and land based GSM systems which made possible by "Mobile Network Association".
Try the new cell phone tracking system. This BETA version is free.
Do share your experiences. It is useful for detecting the location of your children or partners.
Posted: 07 Feb 2013 07:31 AM PST
Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil (Bersih 2.0) hari ini memfailkan saman ke atas News Straits Times Press (Malaysia) Berhad kerana didakwa menyiarkan artikel berunsur fitnah tahun lalu.
Andrew Khoo, ahli jawatankuasa bertindak Bersih 2.0, hari ini berkata saman tersebut difailkan ke atas artikel yang ditulis dalam akhbar berbahasa Inggeris News Straits Times pada 21 September, 2012, bertajuk "Plot to destabilise government" (Plot untuk menjatuhkan kerajaan).
"Kita mengkaji artikel tersebut dan kita dapati artikel tersebut banyak melakukan tuduhan palsu ke atas Bersih dan aktivitinya," katanya apabila bertemu wartawan di lobi Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur.
"Jadi kita perlu betulkan fakta, dan supaya tidak berlaku lagi laporan palsu, kita tidak ada pilihan selain memfailkan saman," katanya lagi.
"Saya ingin jelaskan di sini kita juga menuntut maaf dan menarik semula laporan tersebut tetapi tidak ada sebarang tindakan dari NST," kata Khoo.
Peguam Bersih Daniel J. Albert berkata surat mengenai perkara tersebut ditulis pada2dan3Oktober tahun lalu.
Plaintif dalam kes ini ialah 15 orang ahli jawatankuasa bertindak Bersih 2.0, manakala NSTP (M) Berhad dan penulis artikel tersebut sebagai defendan.
Bersih berkata mereka mencari ganti rugi berdasarkan amaun yang ditentukan mahkamah serta injuksi untuk menghalang defendan dari, antaranya menerbitkan artikel atau fitnah.
Posted: 07 Feb 2013 06:23 AM PST
Source FB of Ven Ravikaတော်သင့်ပြီ
တပ်မတော်သားတစ်ဦးကို နားလည်နိုင်ဖို့ သူတို့ဝေါလ်တွေကို လိုက်ဖတ်ကြည့်မိတယ်။
၁။ ဖက်ဒရယ်မူကြောင့် အာဏာသိမ်းခဲ့ရကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုကို ကယ်တင်ခဲ့ရကြောင်းဆိုပြီး တပ်မတော်ကို လူ့အချို့အမြင်မှားနေကြခြင်းမှာ တပ်မတော်ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘဲ အာဏာရှင်အချို့ရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ရေးကြတယ်။
၂။ ၈၈ အရေးအခင်းမှာ မင်းမဲ့စရိုက်ကြောင့် တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုပြီး ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ရခြင်းမှာ ပညာရှင်အားနည်းခဲ့လို့ဖြစ်ကြောင်း ဖာထေးကြတယ်။
၃။ တပ်မတော်ကို အပြစ်ပြောသူများ၊ စစ်တက္ကသိုလ်ကို အထင်သေးသူများဟာ တစ်နေ့မဟုတ်တစ်နေ့ ပြန်ပေးဆပ်ရမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောပြီး စစ်သားဆိုတာ ညီပြီသားဖြစ်ကြောင်း ရဲစိတ်ရဲမာန်ပြကြတယ်။
၄။ သူတို့အဓိကတိုက်ခိုက်နေသူမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသားများနဲ့သာမကဘဲ ပြည်သူများနဲ့တောင် ရန်တိုက်ပေးနေကြောင်း တွေ့ရပြီး ၂၀၀၈ ဥပဒေမှာ တစ်မတ်သားအမတ်များ ရှိနေခြင်းမှာ တပ်မတော်က ချက်ချင်းထွက်သွားခဲ့ရင် ပြည်သူတို့က တာဝန်မဲ့ကြောင်း အစွပ်စွဲခံရမှာစိုးလို့ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းပြကြပါတယ်။
၁။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အိုင်ဒီယာဟောင်းတွေ စွဲကပ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အမှန်မတော့ သူ့မှာသာ ၁၉၆၂-ခုနှစ်က အိုင်ဒီယာတွေ မကုန်သေးဘဲ တပ်မတော်ကို ဆက်ပြီး ဖျက်ဆီးနေတာပါ။
၂။ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ခွဲထွက်ရေး၊ တပြည်ထောင်စနစ်ကို ပြည်ထောင်စုလို့ ဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်မြင်နေသမျှတော့ ပြည်တွင်းစစ်ကြီး ပြီးဦးမှာမဟုတ်ဘူး။
၃။ တပ်မတော်သားတွေ ငတ်ပြတ်နေတာ လူတိုင်းအသိပါ။ ဒါပေမဲ့ မတရားတဲ့အမိန့်တွေကို နာခံပြီး အပြစ်မဲ့ပြည်သူများကို နှိပ်စက်ခဲ့တာကလည်း သမိုင်းသိပါ။ တပ်မတော်သားဦးရေကို တိုးချဲ့ပြီး တပ်မတော်သားတစ်ဦးရဲ့ မိသားစုကို လောက်ငအောင် မကျွေးဘဲ မိမိကသာ နိုင်ငံခြားဘဏ်မှာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဒေါ်လာမီလီယံပေါင်းများစွာ အပ်ထားတဲ့ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များကိုပဲ အပြစ်တင်ပါ။ အတိုက်အခံများနဲ့ တိုင်းရင်းသားများကို ဒေါ်လာစားများလို့ မျက်စိမှိတ်ပြီး စွပ်စွဲနေမဲ့အစား မျက်စိကို ဖွင့်ပြီး မနက်ဖြန်စားရမဲ့ထမင်းရှိရဲ့လားလို့ သေချာကြည့်ပါ။
ပြည်သူ့ရင်ခွင်ကို မခိုလှုံသမျှတော့ ပြည်သူ့တပ်မတော်မဖြစ်ဘူးဆိုတာ မှတ်ပါ။ တိုင်းပြည်ကို လက်တလုံးခြား ချောက်ထဲကျမှာကို ကယ်တင်ခဲ့ရတယ်လို့ လူကြားကောင်းအောင် မပြောကြပါနဲ့။ မွေးကတည်းက ဒီအကြောင်းပဲ ကြားလာခဲ့ရပါတယ်။ တော်သင့်ပြီ။
TQ ကောင်းကင်ကို for : သည်းမခံခြင်းသည်လည်း ကောင်းမှုကုသိုလ်
အယူအဆ ရေးရာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ရင် သည်းခံခြင်းဟာ ကောင်းမှုကုသိုလ်လို့ လူတော်တော်များများ တွေးကြပါတယ်။ သူတို့က ပြောပါလိမ့်မယ်။ ကွဲပြားတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ကွဲပြားတဲ့ တန်ဖိုးထားမှုတွေ ရှိနေတဲ့ အကြောင်းတွေ၊ ဒါကြောင့်မို့ "ငါတို့ဟာမှ ငါတို့ဟာ၊ ငါတို့ဟာသာလျှင် အမှန်တရား" လို့ လှေနံဓါးထစ် မယူဆသင့်ကြောင်း ပြောကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် "ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကို သည်းခံကြ" ဆိုပြီး ပြောကြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ့အယူအဆဟာလည်း အခြေအနေ တော်တော်များများအတွက် သင့်လျော်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သူ့အကြိုက်၊ ကိုယ့်အကြိုက် အလျောက် တကိုယ်ရည် ရွေးချယ်ရမယ့် တချို့ ကိစ္စတွေမှာ မတူညီမှုတွေကို ယေဘုယျအားဖြင့် သည်းခံရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အယူအဆ ကွဲပြားမှု မှန်သမျှကို အမြဲတမ်း အခါခပ်သိမ်း သည်းခံရမယ် ဆိုရင်တော့ မသင့်လျော်ပါ။ လူ့အဖွဲ့အစည်း ကောင်းကျိုးအတွက် အားလုံးလက်ခံသင့်တဲ့ စံနှုန်းတွေ၊ တရားတွေ ရှိနေလို့ပါပဲ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျောင်းဆရာ တယောက် အဖြစ် စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ အစစ အရာရာ တထပ်တည်း တူနေတဲ့ အဖြေလွှာ နှစ်ခုကို မတူညီတဲ့ Grade တွေ ပေးမိတယ် ဆိုပါစို့။ ကျောင်းသားတွေ ကျေနပ်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ချွတ်စွပ်တူနေတဲ့ အဖြေလွှာ နှစ်ခုမှာ တခုကို အမှတ်များများ ပေးလိုက်ပြီး နောက်တခုကို အမှတ် နည်းနည်းပဲ ပေးလို့ပါ။ တရားမျှတမှု မရှိဘူးလို့ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အယူအဆရေးရာ မတူညီမှု မှန်သမျှတိုင်းကို အမြဲတမ်း သည်းခံမယ် ဆိုတဲ့ သူတွေဟာလည်း တကယ်တော့ ခုနက ပြောခဲ့တဲ့ ချွတ်စွပ်တူတဲ့ အဖြေလွှာ နှစ်ခုကို အမှတ်နှစ်မျိုးပေးတဲ့ ကျောင်းဆရာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုယ့်လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲက လူတွေရဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့ အဖြေလွှာ [မကောင်းတဲ့ အယူအဆ တခုခု] ကိုတော့ "ရှုံး" (သို့မဟုတ်) "မှားယွင်း" လို့ သတ်မှတ်ထားချိန်မှာ တခြားလူ့အဖွဲ့အစည်းထဲက ပုံစံတူ ခပ်ညံ့ညံ့ အဖြေလွှာ [ပုံစံတူ မကောင်းတဲ့ အယူအဆ တခုခု] ကိုတော့ "အောင်" (သို့မဟုတ်) "မှန်ကန်" လို့ လိုက်လျောမှုနဲ့ သတ်မှတ်ပေးထားလို့ပါ။
ဥပမာ တခု ပေးချင်ပါတယ်။ အရှုံးပေးရင် နှလုံးအေးတယ် ဆိုတဲ့ စကားကို လက်ကိုင်ထားသူ တယောက် ရှိတယ် ဆိုပါစို့။ သူက သူ့ဘာသာသူတော့ အထိုက်အလျောက် အမြင်ကျယ်တယ်။ သူ့မှာ လူမျိုးရေး အမြင်ကျဉ်းမြောင်းမှု ဘာညာ မရှိဘူး ဆိုပါစို့။ သူကိုယ်တိုင်တော့ လူမျိုးရေး ခွဲခြားခြင်းဟာ "မှားတယ်" လို့ ယူဆတဲ့ အတွက် အဲလိုလုပ်ရပ်ကို ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူး ဆိုပါစို့။ ဒါပေမဲ့ သူက အေးအေးဆေးဆေး သမား။ သူများကို ဆန့်ကျင်ပြောရမှာ အားနာတတ်တယ်၊ အမြဲတမ်း လိုက်လျော အလျှော့ပေးတတ်တယ်၊ လူတိုင်းနဲ့လည်း အဆင်ပြေချင်တဲ့သူ ဆိုပါစို့။ သူ့မိတ်ဆွေ တယောက်က သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက် Wall မှာ လူမျိုးရေး ခွဲခြားတာတွေ လာ share မယ်။ အဲဒီ့မိတ်ဆွေက ကိုယ့်ရှေ့မှာ တခြားလူမျိုးခြားတွေကို ခွဲခြား ဆက်ဆံတာ၊ နှိမ့်ချ ဆက်ဆံတာတွေ လုပ်လာတဲ့ အခါကိုယ်က လက်မခံကြောင်း မပြသဘဲ "သြော်…သူ့မှာလည်း သူ့အကြောင်းပြချက်နဲ့သူ အမျိုးသားရေး အမြင်တွေ၊ မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတဲ့ အမြင်တွေ ရှိနေလို့ ဖြစ်မှာပါလေ၊ အဲလိုခွဲခြားခြင်းက သူ့အတွက်တော့ အမှန်တရား ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ သူလည်း သူ့လူမျိုးသူ ချစ်လွန်းအားကြီးလို့ ဖြစ်မှာပါလေ" လို့ တွေးပေးလိုက်တယ် ဆိုပါစို့။ ဒီလို တွေးပေးလိုက်ခြင်းဟာ ထပ်တူ အဖြေလွှာ ၂ ခုကို မတူတဲ့အမှတ် တွေ ပေးလိုက်တဲ့ ကျောင်းဆရာလို ဖြစ်သွားမှာပါ။ အဲလိုတွေးပေးသူဟာ၊ ဒီမကောင်းတဲ့ အပြုအမူ တခုတည်းကိုပဲ ကိုယ့်အတွက်တော့ "မှား" တယ်။ တခြားသူအတွက်တော့ "မှန်" တယ်လို့ အဲဒီ့ တခြားသူရဲ့ အစွဲအလမ်း ရှုထောင့်ကနေ သွားတွေးပေးပြီး အမှန်အဖြစ် သတ်မှတ် နားလည် ပေးလိုက်လို့ပါပဲ။
တချို့သူတွေ ပြောတတ်ကြတာ ရှိပါတယ်။ ဟစ်တလာက ဂျူးလူမျိုးတွေကို သန်းနဲ့ချီပြီး သတ်ခဲ့တာဟာ ကြားလူတယောက် အမြင်နဲ့ ကြည့်ရင် မှားပေမဲ့ သူ့လူမျိုးတွေ အသာစီးရဖို့အတွက် လူမျိုးခြားတွေကို သတ်တာမို့ သူတို့ ရှုထောင့်က ကြည့်ရင် မှန်တယ် လို့ တချို့က ဆိုတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာ double standard ပါ။ စံနှုန်းနှစ်မျိုးကို ကျင့်သုံးနေခြင်းပါ။ တကယ်တော့ ဓမ္မဆိုတာ "ဘက်" တွေ၊ အခြေအနေတွေ ကို လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲရိုး ထုံးစံမရှိပါ။
နောက်ထပ် ဥပမာ တခုပေးရရင် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပညာသင်ကြားခွင့်တွေကို ပိတ်ပင်တားဆီးတာဟာ မှားယွင်းတယ်လို့ ခံယူသူတယောက်ဟာ ကိုယ်တိုင်လည်း အမျိုးသမီးတွေ တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိရေးကို အားပေးရမှာ ဖြစ်သလို၊ တခြား အစဉ်အလာတွေ အောက်က လူတချို့က အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပညာသင်ကြားခွင့်ကို ပိတ်ပင်တားဆီးလာရင်လည်း ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ "သြော်…သူတို့ ယဉ်ကျေးမှုအရပဲလေ၊ သူတို့ ဘာသာရေးအရ ပဲလေ" ဆိုပြီး နားလည်ပေးဖို့ မသင့်ပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စံနှုန်း ဆိုတာ ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ အစဉ်အလာတွေနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။ မှားယွင်းမှုတွေကို သည်းမခံရဘူး ဆိုတာဟာ မတူတဲ့ အုပ်စုတွေကို တိုက်ခိုက်ရမယ်၊ ရန်ရှာရမယ်လို့ ဆိုလိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မှားယွင်းမှုတွေအပေါ်မှာ နှုတ်ဆိတ်မနေဘဲ တားသင့်တာတား၊ ဆွဲခေါ်သင့်တာတွေကို ဆွဲခေါ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးလာတာကတော့ အမှားတွေကို တုံ့ပြန်ရာမှာ စေတနာ ပါမပါနဲ့ တုံ့ပြန်ပုံ တုံ့ပြန်နည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မှန်စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ တုံ့ပြန်တာနဲ့ ရန်ရှာလိုစိတ် သက်သက်နဲ့ တိုက်ခိုက်တာက အများကြီး ကွာပါတယ်။
ကျနော်တို့ဆီက နိုင်ငံသားတချို့မှာ မကြာမကြာ တွေ့ရတတ်တဲ့ အပြုအမူကို ကြည့်ရအောင်။ အသက် ၁၅ နှစ် အရွယ် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံသူ မာလာလာ (Malala) ရဲ့ ကိစ္စနဲ့ ဥပမာ ပေးချင်ပါတယ်။ တာလီဘန်တွေက မိန်းကလေးတွေရဲ့ ပညာသင်ကြားခွင့် အပြင်းအထန် ဆန့်ကျင် တားမြစ်ပါတယ်။ မာလာလာ ကတော့ အဲလို အန္တရာယ်တွေ ကြားကနေ ကိုယ်တိုင်လည်း ပညာသင်ချင်သူ ဖြစ်သလို မိန်းကလေးတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပညာသင်ကြားခွင့်ရအောင်လည်း သူ အသက် ၁၁ နှစ် အရွယ်ကတည်းက စပြီး စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခဲ့သူပါ။ အကြိမ်ကြိမ် ရန်ရှာခံနေရ၊ အသက်အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်ခံနေရတဲ့ ကြားက မာလာလာဟာ မိန်းကလေးတွေ ပညာသင်ကြားခွင့် ရရှိရေးအတွက် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေ အပြင်းအထန် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၂ခုနှစ် အောက်တိုဘာမှာတော့ မာလာလာ စီးလာတဲ့ ကျောင်းကားကို တာလီဘန်တွေက တားဆီးပြီး မာလာလာကို ရွေးထုတ်ပြီးတော့ သေနတ်နဲ့ ပစ်တဲ့အတွက် မာလာလာဟာ ခေါင်း၊ လည်ပင်းနဲ့ ပုခုံးမှာ ဒဏ်ရာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရခဲ့ပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ ဒဏ်ရာကြောင့် မာလာလာဟာ သေမလို ဖြစ်ခဲ့ရ၊ မေ့မျောခဲ့ရပေမဲ့ ဆေးကုသမှုတွေ ခံယူပြီး ကျန်းမာရေး အခြေအနေ တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့လို ကိစ္စမျိုးကို ကျနော်တို့ နိုင်ငံသားတချို့ ဝေဖန်ရာမှာ တာလီဘန်တွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်တာကတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝေဖန်သူတွေက စေတနာနဲ့ ဝေဖန်တာမျိုးထက် တာလီဘန်တွေက မွတ်စလင်၊ ဒါကြောင့် မွတ်စလင် မှန်သမျှ တယောက်မှ မကောင်းဘူး၊ အကုန်ဆိုးတယ် ဆိုတဲ့ ဝါးလုံးရှည်နဲ့ ရမ်းတဲ့သဘောမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ တဘက်မှာ မာလာလာလည်း မွတ်စလင် ဆိုတာကို မမြင်ကြဘူး။ အဲလိုပဲ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်တွေက မွတ်စလင် အမျိုးသမီး activists တွေကို နှိပ်ကွပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်၊ တချို့ဝေဖန်သူတွေက…အာခံရဲတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို လေးစားတာမျိုး၊ နှိပ်ကွပ်ခံရသူတွေကို သနားတာမျိုးထက် မွတ်စလင်မှန်သမျှ တယောက်မှ မကောင်းဘူး ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး ပြောချင်စိတ်တွေပဲ ထက်သန်နေတာကို တချို့တွေ ဆီမှာ တွေ့ရပါတယ်။ တကယ်လို့ မာလာလာလို လူမျိုး မြန်မာပြည်မှာ ပေါ်လာရင်လည်း အဲလိုလူတွေက သနားကြမှာမဟုတ်ဘဲ ကုလားမ ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ ဆဲကြဦးမှာပါပဲ။ အယူအဆဆိုးတွေကို ဖြန့်ချီသူတွေ၊ အစွန်းရောက်တွေကိုပဲ ပစ်မှတ်ထားရမယ့် အစား အလယ်အလတ် သမားတွေ၊ ကောင်းတဲ့တော်တဲ့သူတွေ ကိုပါ ရန်ရှာနေကြပါတယ်။ တခါတခါ ဆိုးဝါးတဲ့ သတင်းတွေ တွေ့ရင် အလုအယက် share ကြတာမျိုး မြင်နေရတော့ ဒါမျိုးအဖြစ်တွေကို တကယ်မရှိစေချင်တာမှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင်မှ သံသယ ဖြစ်မိပါတယ်။ ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေ ရှိလေ သူတို့ကို အပုပ်ချလို့ ကောင်းလေ၊ မုန်းအောင်လုပ်လို့ ကောင်းလေလို့တွေးပြီး အဲလို အဖြစ်အပျက်တွေ များများရှိစေချင်တာလားလို့တောင် သံသယ ဖြစ်မိပါတယ်။
Social network တွေပေါ်မှာ အများဆုံးတွေ့ရတာတွေက အယူအဆမှားတွေကို ဝေဖန်တာမျိုးထက် hate speech မျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ hate speech ဖြန့်ဝေသူ ကိုယ်တိုင်က မှားယွင်းနေတဲ့ အတွက် တခြားသူရဲ့ အမှားမျိုးကို ဝေဖန်ဆန့်ကျင်ရာမှာ ထိရောက်မှုလည်း မရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ ရန်လိုမှုကို အခြေခံပြီး လုပ်နေတာမို့ ကောင်းကျိုးလည်း ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မာလာလာဟာ တခြားသူတွေ (တာလီဘန်တွေ) ရဲ့ အယူအဆ မှားတွေကို သည်းခံမနေဘဲ၊ အန္တရာယ်တွေ ကြားထဲကနေ နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ တုံ့ပြန်ခဲ့သလိုမျိုးပဲ၊ ကိုယ်ပိုင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းကို တန်ဖိုးထားသူ တယောက်ဟာ၊ တခြားတယောက် (ဒါမှမဟုတ်) တခြားအုပ်စုတခုရဲ့ မှားယွင်း ချွတ်ချော်မှု တခုခုကို တွေ့တဲ့အခါမှာ နှုတ်ဆိတ်မနေဘဲ ဝေဖန်ဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။
ဒဿနိကဗေဒ ရှုထောင့်က ကြည့်ရင်တော့ မှန်ခြင်းမှားခြင်း ခွဲခြား သတ်မှတ်တဲ့ နေရာမှာ၊ ကောင်းမှု မကောင်းမှု သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ၊ သည်းခံသင့်တဲ့ limit သတ်မှတ်တဲ့ နေရာတွေမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေးငြင်းခုန်စရာတွေ ရှိနေမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ လူမှုလောကမှာတော့ အဲ့လောက်ထိ ကပ်ကပ်သတ်သတ် စဉ်းစားစရာ မလိုတာမို့ သိပ်မခက်ခဲပါဘူး။ အမှန်အမှား သတ်မှတ်ဖို့ ညှိနှိုင်းရာမှာ အစဉ်အလာ ဘာသာရေးတွေကို သုံးပြီး ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ဖို့ အဆင်မပြေ နိုင်ပေမဲ့ ဘုံဆန်တဲ့၊ ဘာသာလူမျိုး မရွေး သက်ဆိုင်တဲ့ လူသားကျင့်ဝတ်တွေ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်တွေ၊ လူ့အခွင့်အရေး စံနှုန်းတွေနဲ့ ချိန်ထိုးပြီး အတိုင်းအတာ တရပ်အထိ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာပါ။
အဲလို ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ ဆိုရင်၊ နောက်ဆုံးပိတ် လိုအပ်တာကတော့ မှားနေတာကို မှားနေတယ်လို့ မကြောက်စတမ်း၊ အားမနာ စတမ်း ပြောရဲတဲ့ သတ္တိပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူဆိုးတွေ အစွန်းရောက်သူတွေက လက်ရဲဇက်ရဲ ရှိသလောက်၊ အမှန်အမှား ခွဲခြားတတ်ပြီး စိတ်ကောင်းရှိသူတွေက ကြောက်နေကြတဲ့ အတွက်၊ အားနာနေကြတဲ့ အတွက်၊ စိတ်ကုန်နေကြတဲ့ အတွက်၊ အမုန်းမခံနိုင်ကြတဲ့ အတွက်၊ လူမှုလောကကြီးထဲမှာ တဘက်စောင်းနင်းတွေ ဖြစ်နေတာမို့ ရဲဝံ့တဲ့ အသံတွေ လိုအပ်နေပါတယ်။ အမှားအယွင်းတွေ အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖိနှိပ်မှုတွေကို သည်းမခံတဲ့ အသံတွေ လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်…သည်းမခံခြင်းသည်လည်း ကောင်းမှုကုသိုလ်။
ကောင်းကင်ကို Ref: (Andrew Pessin ၏ Intolerance isaVirtue ကို မှီငြမ်း ရေးဖွဲ့ပါသည်။) ခေတ်မောင်းဂျာနယ် အတွဲ (၂) အမှတ် (၁) ထဲမှာ ကျနော် ရေးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးပါ။ ခေတ်မောင်း ဂျာနယ် တစောင်လုံးကို ဒီမှာ download လုပ်လို့ ရပါတယ်။
Posted: 07 Feb 2013 04:49 AM PST
Posted: 07 Feb 2013 06:04 AM PST
SHAH ALAM – Naib Presiden Pas, Salahuddin Ayub menasihatkan bekas Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad memberi tumpuan lebih untuk menyelamatkan Umno dan Barisan Nasional (BN) daripada mencampuri urusan dalaman Pakatan Rakyat (PR) khususnya Pas.
Beliau yang juga Ahli Parlimen Kubang Kerian berkata, kenyataan Dr Mahathir yang mencemuh Pas kerana takut dan tidak berani untuk keluar daripada ikatan itu tidak timbul.
Sebaliknya kata beliau, kerjasama politik itu perlu diteruskan malah telah disepakati sejak 2008 lagi.
"Kenapa Tun Dr Mahathir nak peduli hal rumah tangga orang lain, Pas tiada niat untuk tinggalkan PR, kita sudah sepakat dengan ikatan itu dengan dasar bersama sejak 2008 lagi.
"... apa yang dikatakan oleh bekas perdana menteri itu hanyalah khayalan beliau sendiri, iltizam kita hanyalah untuk menghadapi BN pada Pilihan Raya Umum ke-13 (PRU13) nanti," katanya yang dihubungi Sinar Harian Online, hari ini.
Salahuddin juga menyifatkan hubungan Pas, DAP dan PKR pada masa ini sangat baik dan tiada keperluan bagi Pas untuk meninggalkan gagasan itu.
"Kita bina hubungan (tahaluf siyasi) ini dengan baik dan kami yakin tidak ada yang perlu ditakutkan tentang kerjasama ini," ulasnya.
Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan bekas Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad semalam yang mencemuh Pas sebagai tidak berani keluar daripada PR kerana terlalu bergantung dan mempercayai DAP.
Dr Mahathir berkata, Pas khuatir tidak akan mendapat sokongan rakyat dan seterusnya kalah dalam PRU13 akan datang sekiranya bertindak keluar daripada pakatan itu. -SH
Mahathir sebenarnya telah menghidu kekalahan UMNO BN di dalam PRU13 akan datang ini.
Maka ditonjolkan dan diwujudkan isu yang bukan-bukan yang sebenarnya hanyalah mendedahkan keresahannya yang amat sangat tentang kelemahan UMNO BN kini.
Keakraban hubungan PAS-DAP menjadi igauan ngeri untuknya kerana ia merupakan satu pukulan maut buat UMNO BN.
Latahnya semakin menjadi-jadi apabila mengetahui Karpal Singh dan Nik Aziz bersahabat baik. Cemburunya membuak-buak.
Akhirnya, beliau memainkan isu perkauman, memainkan isu keagamaan, tiba-tiba menjadi pembela kepada Ustaz Nasharuddin sedangkan sebelum ini pernah Mahathir ambil pusing mengenai bekas Timbalan presiden PAS itu?
PAS adalah milik ahli PAS dan ahli-ahli PAS, melalui muktamar yang berhak menentukan halatuju dan masa depan PAS sendiri. Siapa Mahathir dan yang lain-lain yang bermuka tembok nak tentukan halatuju PAS? Tak malukan?
Posted: 07 Feb 2013 03:07 AM PST
We initally approached Jenice Lee, the ADUN for Teratai, after the hump was built. She had asked Dorothy to look into the matter. Dorothy kept insisting that the hump was built at the request ofamajority of ten residents along the road. She also said "I believe people of your situation would more than welcome it because it will practically slow down vehicles from speeding and thus safety is the priority in the mind of these residents in your neighbourhood."
The neighbours with Jamali Othman (3rd from left), Winnie (4th from left) and Gary (right).
My lengthy explanation to her and Jenice that the hump isabarrier to my mobility andahazard to my safety fell on deaf ears. Jenice then suggestedameeting with the other residents to sort this out. We unanimously objected because when the hump was built outside our houses, we were never consulted first. Jenice even mentioned that "From the picture I received, the hump is built in between your house and your neighbour." It was clear how little she understood what our complaints were all about.
Dorothy was reported in The Star to have said, "We can't entertain one person's complaint as we want to help everyone." Did she mean to say that my safety concerns are irrelevant? Asadisabled person, I do not have the right to object to facilities that will endanger me, especially when it is right outside my house? She also obviously left out the fact that my neighbour had gone to her office to makeacomplaint and sought her assistance on this matter as well.
"Membiarkan projek bernilai tinggi hanya dimonopoli tanpa perkongsian syarikat tempatan adalah pengkhianatan kepada ekonomi negara.
"Semua ini merupakan persoalan yang perlu dileraikan dan memerlukan respon daripada pihak terbabit.
"SPRM perlu ambil tindakan tegas sama ada mengheret pesalah yang membazirkan wang rakyat atau membersihkan pihak terbabit dengan menyatakan tiada salah guna kuasa berlaku," katanya.
Posted: 07 Feb 2013 12:46 AM PST
A rooster lays an egg on the roof ofabarn.
Each side of the roof hasa90 degree angle and windspeed is approxiamately 15 mph blowing in an eastern direction.
The egg is layed at the front part of the roof, which has been caved in due to weather.
Because of that part of the roof being caved in, it hasaslight 45 degree angle to it, which is more than the rest of the roof.
So, which side of the roof will the egg roll off:
(a) the one with the eastern exposure
(b) the one with the western exposure?
Please leaveacomment if you wish to share your response to this riddle.
I will post the answer as soon as I haveanumber of responses.
Posted: 07 Feb 2013 12:17 AM PST
WhenaFoochow woman travels, she sure does not travel light. Look at the goodies Yan brought for Wuan and me all the way from Sarawak. The fresh whole semah fish andacut of tapah fish she got from the interiors of Kapit are not in the picture. According to Yan, the semah is sought after and rare nowadays. It is also the next most expensive fish after the empurau. The latter can fetchaprice of up to RM1,000 per kilo.
The goodies from Yan minus the two fresh fishes which are in the freezer.
Yan was in the city during the Thaipusam holiday and had arranged to meet up with Jocelyn and us at Mid Valley Megamall. Among the goodies in the bag were cookies that she baked, andarecipe together withacan of clams to cook the white rice sticks with. Talk about thinking of everything. I believe she lugged an equal amount of goodies, if not more, for Jocelyn as well. I would have to be an octopus to travel with so many things.
The cookies from Jocelyn labelled with the most interesting names and the slab of layer cake.
Jocelyn, the other Foochow woman, always come bearing gifts whenever we meet. This time, it was homemade cookies that she had been labouring over for the past weeks andaslab of layer cake. For the layer cake alone, she stood by the oven for three hours, painstakingly baking one layer on top of another. I have been teasing her over Facebook for sharing photos of the cookies. I will remember not to do that again next time.
One for the memory at Little Penang, Mid Valley Megamall with Phyllis and Jocelyn.
Image courtesy of Jocelyn.
With cookies from Yan and Jocelyn, Wuan and I do not even have to buy any now. I estimate these cookies will last us at least two months. If I make friends withafew more Foochow women, I will be fed for life. Now, that is an idea. Thank you for the cookies and such, you too! And may the new year bring an abundance of prosperity and joy to your family and you. Gong Xi Fa Cai!
Cynfully Delicious Cookies
Make Cloudy Sky Blue – Part 2
Eleanor's Sugee Cake
Posted: 07 Feb 2013 01:16 AM PST
"Ia perkara yang amat mendukacitakan ketika mana rakyat susah untuk mendapat sekeping tanah dan untuk membeli rumah di sekitar Petaling Jaya dan Subang Jaya.
"Tetapi mereka mendapat tanah dengan mudah dan menjadi 'jutawan segera' dengan mendapat kelebihan seperti ini," kata Nik Nazmi.
"Tanah-tanah tersebut mempunyai 99 lot tanah banglo dengan tempoh pajakan 99 tahun di mana diluluskan oleh mesyuarat Exco ketika itu pada 20 Februari 2001," kata Hannah.
"Kita mahu pemimpin BN memberikan respon berkenaan isu ini apabila mereka berkempen di Subang Jaya nanti kenapa mereka memperolehi tanah pada harga yang murah," kata Hannah.
"Kita menyeru rakyat Selangor membuat penilaian yang tepat dalam PRU ini," tegas Ng.
Posted: 06 Feb 2013 10:51 PM PST
Bersih files defamation suit against NST
11:22AM Feb 7, 2013
The Bersih coalition has filedadefamation suit against English-language daily New Straits Times (NST) over its article accusing the pro-electoral reform group of conspiring to destabilise the government. "We
have studied the article very carefully and we find that the article
makesalot of false
Posted: 06 Feb 2013 08:17 PM PST
Through thick and thin: Tom and Annie Thong on vacation in Sydney, Australia.
Thongs practically had it all. Withatextile business that raked in
US$35milayear, they dined in some of the most expensive restaurants,
stayed in five-star hotels and ledavery comfortable life.
Posted: 06 Feb 2013 10:23 PM PST
Di saat kelembapan industri muzik Malaysia sejak lebih sedekad, langkah mengundang penyanyi luar, Park Jae-sang atau dikenali sebagai "Psy" untuk membuat persembahan percuma di Pulau Pinang sempena majlis rumah terbuka Gong Xi Fa Chai dengan bayaran lebih RM1 juta tak lain adalah satu bentuk pengkhianatan kepada industri muzik, penyanyi dan artis tempatan.
Biar apapun alasan atau pihak mana sekalipun yang dikononnya membayar, mengundang artis sepopular Psy untuk majlis sambutan Tahun Baru Cina kali ini yang akan pula melibatkan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak adalah tak lain diyakini sebagai usaha memancing sokongan undi khususnya golongan muda menjelang Pilihanraya Umum.
Hal ini cukup mendukacitakan terutama ketika artis veteran tempatan hanya dihulur RM2 ribu seorang baru-baru ini melalui Yayasan Artis 1Malaysia (YA1M). Kalau bayaran kepada Psy berjumlah RM2 juta, ia bersamaan dengan peruntukan keseluruhan kepada YA1M untuk tahun ini.
Sekiranya persembahan Psy di Pulau Pinang itu kelak tidak mengenakan bayaran tiket kepada penonton, maka tentulah tidak akan ada apa-apa duti atau cukai langsung boleh dipungut oleh kerajaan.
Dalam kata lain, jemputan berbayar itu semata-mata akan merugikan dana rakyat. Perkara ini boleh disemak di bawah Akta Duti Hiburan 1953 dengan syarat-syarat untuk kerajaan mengutip duti atau cukai hiburan.
Isu ini berbeza dengan artis warga asing yang bekerja dan bekarya dalam Malaysia apabila mereka perlu membayar tarif cukai sebagaimana pekerja asing profesional lainnya.
Perihal artis luar menetap di Malaysia sebenarnya lebih mendatangkan keuntungan kepada industri berkaitan seni hiburan di samping memberikan hasil pungutan cukai kepada negara.
Pemerintah mungkin juga tak menyedari bagaimana ada ribuan penyanyi tempatan yang menerima bayaran persembahan sangat rendah atau mungkin sahaja secara percuma untuk mempromosikan bakat mereka.
Langkah mengundang Psy sekaligus membuktikan bahawa dasar kebudayaan nasional sekian lama telah gagal melahirkan artis Malaysia yang mampu popular dan setanding di peringkat antarabangsa.
Nik Aziz: Langkah BN bawa Psy membazir KOTA BHARU - Mursyidul Am Pas, Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat menyifatkan langkah membawa penyanyi popular Korea, Psy bagi memeriahkan sambutan Tahun Baru Cina Barisan Nasional (BN) di Pulau Pinang pada 11 Febuari ini satu pembaziran.
"Bagi saya sambutan Tahun Baru Cina merupakan perayaan masyarakat terbabit yang meriah, namun tidak perlulah membazir dengan menjemput penghibur dari luar untuk memeriahkan acara sambutan.
"Daripada kita agungkan artis luar patut kita beri sokongan kepada anak-anak muda kita, namun persembahan yang dilakukan mestilah bermesej dan tidak menyimpang dari budaya negara kita yang masyarakatnya majoriti beragama Islam," katanya kepada media hari ini selepas menziarah dua rumah masyarakat Cina sempena Tahun Baru Cina di Kampung Tebing Tinggi dekat sini -SH
Posted: 06 Feb 2013 02:30 PM PST
The young woman was sitting and thinking: "I'm glad the soldier kissed me, but I wish my grandmother had not slapped him!"
The young Marine sat there withasatisfied smile on his face. He thought to himself: "Life is good. When doesafellow have the chance to kissabeautiful girl and slap his commanding officer all at the same time!"
Posted: 06 Feb 2013 07:03 PM PST
"Saya 90 peratus yakin, pegawai dan pengawal keselamatan Perdana Menteri dan isteri, Datin Seri Rosmah Mansor berada di lokasi Altantuya dibunuh," katanya pada sidang media di Ibu Pejabat PAS, bersama pemimpin parti itu, tengahari tadi.
"Memang saya tidak ada di tempat kejadian tetapi berdasarkan hubungan rapat saya dengan keluarga Perdana Menteri, saya yakin saya kenal mereka yang terlibat," kata Deepak.
"Walaupun saya tiada di situ, saya pasti 90 peratus," katanya.
"Jika dilihat secara logik, apakah tujuan pegawai-pegawai perdana menteri dan isteri berada di lokasi pembunuhan seorang warga asing jika ia tidak berkaitan tugasan mereka," kata Deepak.
Altantuya dibunuh secara kejam pada 2006 di kawasan hutan di Puncak Alam.
Kepalanya ditembak dan selepas itu badannya diletupkan dengan bom C4 yang biasa digunakan anggota tentera dalam operasi mereka.
"Saya ada surat-surat dan semua dokumen Akta Rahsia Rasmi (OSA) yang sah, mereka tak boleh lawan kebenaran," tegas usahawan permaidani itu.
Menurutnya, selepas siri pendedahan 'top-secret' olehnya, beliau berkali-kali ditekan memaksanya mendapat jaminan imuniti bagi membolehkan lebih banyak pendedahan membabitkan pemimpin nombor satu negara.
Asmuni menyatakan kesediaan menulis surat kepada Peguam Negara bagi membolehkan Deepak mendapat imuniti di bawah Seksyen2(b) yang memberi perlindungan kepada saksi. -KD
Posted: 06 Feb 2013 04:00 PM PST
BBC ONLINE 1 February 2013
Last updated at 04:15 GMT
Expectant mothers are normally offered the option of being induced at 41 weeks
women aged over 40 should be given the option of being induced early to
reduce the risks of losing their baby, saysapaper from Royal College
of Obstetricians and